I-Mediaproxy ifaka amandla we-Vidrovr ukusesha ku-LogServer - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-mediaproxy ifaka amandla we-Vidrovr ukucinga ku-LogServer
EMelbourne, e-Australia - 15 July 2019 - Mediaproxy, umhlinzeki oholayo wezixazululo ze-IP-based broadcast solutions, ukwandisa ikhono lologi lwe-LogServer IP-based, ukuqapha nokuhlaziywa ngokusebenzisa ukuhlanganiswa kwe-Vidrovr video search platform yesikhulumi. Ukusebenzisa amasu okufunda omshini ethuthukile, lokhu kwenza abashayeli bakwazi ukuthola nokuhlola izithombe ngokusebenzisa amathegi ahlukahlukene, kufaka phakathi abantu, umbhalo, umsindo nokuqukethwe okubukwayo.
Izinhlelo zokulondolozwa kwe-playout zanamuhla zingaqukatha inamba enkulu yezinhlelo. I-Mediaproxy LogServer isivele ibonakalise ukuthi iyindlela ehamba phambili yokuthobela, evumela ukuthi impahla ingene ngemvume, ihlolwe futhi ihlaziywe ukuqinisekisa ukuthi ihambisane namazinga okusakaza. Ukwengezwa kwe-Vidrovr kwenza kube lula ukucinga ngemitapo emikhulu yezinhlamvu ezithile bese uhlukanisa ukulandelana okuqondile nezici ngaphakathi kwevidiyo.
I-LogServer iyakwazi ukuthatha ividiyo ebukhoma kusuka emithonjeni yokusakazwa kanye ne-OTT, enekhono lokuyibonisa kubathengi abaningi futhi iqaphe futhi ihlaziye okuqukethwe. Kungangena ngemvume ezenzakalweni zomoya, kwenziwe usesho ngaphakathi kwamafayela, qinisekisa izikhangisi futhi ushicilele izinto ezingxenyeni zenhlalo. I-Vidrovr isekelwe ekufundeni komshini futhi isetshenziswe ngokubambisana nabasebenzisi bokuphela ukuhlanganisa ubuchwepheshe ngezidingo zabo eziqondile. Iyakwazi ukusesha imifudlana bukhoma kanye nama-archives, ukukhiqiza isevisi ephethwe jikelele.
Ngokuhlanganiswa kwe-Vidrovr, i-LogServer manje ingenza imisebenzi eminingi ethuthukisa ububanzi bayo obukhona bezinto eziphezulu. Lokhu kufaka: ukubuyekezwa okusheshayo nokubuyisana kwevidiyo; isizinda esheshayo nokushicilelwa kwevidyo; kanye nekhono lokusesha ngokusebenzisa amathegi we-meta, afana nabantu abaqashiwe, izigcawu, umbhalo onkrini, imibhalo nemisebenzi.
Ekhuluma ngokusebenzisana noMediaproxy, uJoe Ellis, CEO kanye nomsunguli we-Vidrovr, uthi, "Siyajabula kakhulu ngokusebenzisana nomholi emkhakheni obalulekile wokuqapha ividiyo, ukuhlaziywa nokuhambisana. Lokho esikuhlanganyela ne-Mediaproxy ukuqonda umqondo we-Enabled Media njengobambiswano phakathi kwabahlinzeki be-teknologi kanye nesisekelo somsebenzisi. Ukuhlanganiswa kwe-Vidrovr ne-LogServer kuyisibonelo esiwusizo salokho. "
U-Erik Otto, isikhulu esiphezulu se-Mediaproxy, uyanezela, "Ukwengezwa kwe-Vidrovr kuya ku-LogServer kuyisinyathelo esihle kakhulu, kokubili izinkampani ezimbili kanye nesisekelo somsebenzisi esanda kukhula se-Mediaproxy. Zombili izinhlangothi zinezobuchwepheshe obukhulu, kodwa sisuka esimweni sokuthi konke kunkulu kunani lezingxenye. Sonke sinikeza ithuluzi elinamandla kakhulu elingenza ngokucophelela nangokuphumelelayo ukuhlola okubalulekile kokusakazwa kwe-linear kanye nezinsiza ze-OTT. "
I-Vidrovr iyi-platform yebhizinisi yokusesha i-video efaka futhi ibeka izinkomba kokuqukethwe ezingeni le-granular: ukumaka abantu, umbhalo, okuqukethwe okubukwayo, nomsindo. Ipulatifomu yethu iyaqonda ukuthi yiziphi izingxenye zevidiyo enikeziwe ezihambisana nombuzo othize wokusesha futhi uzikhonze njengeziqeshana. Kusukela ku-2016, u-Vidrovr ubelokhu eqinisa izikhungo zomphakathi nezangasese ukwenza okuningi ngokuqukethwe kwevidiyo yabo futhi ngokuzenzakalelayo ukwenza umsebenzi wabo wokusebenza ukuze unike amandla okungcono okwenza imali ngezimpahla zabo zevidiyo. I-Vidrovr isekela ukuhlanganiswa nazo zonke izixazululo zokuphathwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwamavidiyo wesithathu, nokuqukethwe kwevidiyo okusakazwa bukhoma noma ngokusemthethweni noma efwini. Abasakazeli abakhulu namuhla basebenzisa isisombululo se-Vidrovr ukuze babhale amaqoqo wabo we-real-time kanye nengobo yomlando, besebenzisa lawo mavidiyo bobabili ngaphakathi kwamapulatifomu abo okushicilela kanye nabathengi ngokubambisana kwe-label search emhlophe kanye nokulula -usezinhlelo zokuncoma.
Ukuze uthole olunye ulwazi sicela uvakashele www.vidrovr.com
I-Polar Graphics ithatha ukuma ku-ISE 2020 - Disemba 11, 2019
I-Finepoint Broadcast igiya ngama-2020 ngokutshalwa kwezimali okukhulu kuma-lens weCanon UHD - Disemba 11, 2019
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Compliance Inikwe amandla iMidiya I-FOR-A, izinhlelo ezihlukile, I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ukuhlanganiswa i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw bukhoma ividiyo Imithi I-LogServer I-MachineLearning Mediaproxy Ott SJGolden - I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC Umlingisi wevidiyo ukuqapha ividiyo I-Vidrovr	2019-07-15
Olandelayo: I-Globecast ye-IBC 2019 kuqala